မဟာစည်ဆရာတော်ကြီး၏ ခန္ဓာဝန်ချပွဲတွင် မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးမှ ဂါရဝပြု ကန်တော့နေသောရှားပါး ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါ – iTech Media
zarni | June 20, 2020 | News | No Comments
ပထမသင်္ဂါယနာကို သာသနာနှစ် (၁) ဘီစီ-၅၄၄ တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဘာရတောင် သတ္တပဏ္ဏိလိုဏ်ဂူ မဏ္ဍပ်တော်၌ အရှင်မဟာကဿပ၊ အရှင်ဥပါလိ၊ အရှင်အာနန္ဒာ အမှူးပြုသော ရဟန္တာ အပါး ၅ဝဝ တို့က အဇာတသတ်မင်း အထောက်အပံ့ ဖြင့် ခုနစ်လတိုင် နှုတ်တက်အက္ခရာ သင်္ဂါယနာတင်ခဲ့ သည်။
အောက်ဆုံးတွင် ရှားပါးဗီဒီယိုဖိုင်လေး တင်ပေးထားပါသည်။
ဒုတိယအကြိမ် သင်္ဂါယနာကို သာသနာနှစ်(၁ဝဝ) ဘီစီ-၄၄၃ တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဝေသာလီပြည် ဝါဠုကာ ရာမကျောင်းတိုက်၌ အရှင်ယသ၊ အရှင်သဗ္ဗကာမိ၊ အရှင်ရေဝတ အမှူးပြုသော ရဟန္တာအပါး ၇ဝဝ တို့က ကာလာသောကမင်း အထောက်အပံ့ဖြင့် ရှစ်လတိုင် နှုတ်တက်အက္ခရာ သင်္ဂါယနာတင်ခဲ့သည်။
စတုတ္ထသင်္ဂါယနာကို သာသနာနှစ်(၄၅ဝ) ဘီစီ-၉ဝ တွင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ မလယဇနပုဒ် အာလောကလိုဏ်ဂူ၌ အရှင်မဟာဓမ္မရက္ခိတ အမှူးပြုသော ရဟန္တာအပါး ၅ဝဝ တို့က ဝဋ္ဋဂါမဏိမင်း အထောက်အပံ့ဖြင့် တစ်နှစ်တိုင် ပေထက်အက္ခရာ သင်္ဂါယနာတင်ခဲ့သည်။
ပဉ္စမသင်္ဂါယနာကို သာသနာနှစ်-၂၄၁၅ ခရစ်နှစ်- ၁၈၇၁ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ မန္တလေးတောင်ခြေရှိ လောကမာ ရဇိန် ကုသိုလ်တော်ဘုရားဝင်းအတွင်းရှိ စကျင်ကျောက် ဖြူ ၇၂၉ ချပ်ပေါ်တွင် ပိဋကတ်တော်များကို အက္ခရာ ရေးထွင်း၍
ခုနစ်နှစ် ခြောက်လ ၁၄ ရက်တိုင် ကျောက်ထက် အက္ခရာတင်ခြင်း၊ တိပိဋကဓရ မဟာဓမ္မရာဇာဓိရာဇာဂုရု ဘဒ္ဒန္တဇာဂရာဘိဝံသမဟာထေရ် အမှူးပြုသော သံဃာ တော်အပါး ၂၄ဝဝ တို့က ငါးလနှင့် သုံးရက်တိုင် နှုတ်တက် အက္ခရာတင်ခြင်းဖြင့် သင်္ဂါယနာတင်ခဲ့သည်။
ဆဌသင်္ဂါယနာကို သာသနာနှစ် ၂၄၉၈၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် (၁၃၁၆ မှ ၁၃၁၈) (အေဒီ ၁၉၅၄ မှ ၁၉၅၆)၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့တော် ဆဋ္ဌသိင်္ဂ ီမဟာပါသဏဂုဟာ ကျောက်လိုဏ်ဂူတော်ကြီးတွင် ပိဋကတ်တော်များ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်၍
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ ပိုမိုပျံ့နှံ့ကာ အဓွန့်ရှည်ကြာစိမ့်သောငှာ ညောင်ရမ်းဆရာတော်ဘုရား၊ နောင်တွင် မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဘုရားတို့က သံဃနာယကပြုပြီး မဟာစည်ဆရာတော်က မေး၍ မင်းကွန်း တိပိဋကဓရ ဆရာတော်က ဖြေဆိုတော်မူကာ
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ကမ်းပူးချားနိုင်ငံ၊ လောနိုင်ငံ၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ စသော ထေရဝါဒနိုင်ငံ ၅-နိုင်ငံမှ သံဃာတော်များအပါအဝင် သံဃာတော်ပေါင်း ၂၆၁၇-ပါး တို့နှင့် ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာ တင်တော်မူသည်။
နောက်ဆုံး ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာမှ သာသနာ့အာဇာနည် အရှင်မြတ်ကြီး နှစ်ပါးမှ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ နောက်ဆုံးခန္ဓာဝန်ချပွဲတွင်. မဟာစည်ဆရာတော်ကြီး၏ ညီတော်ဖြစ်သော.. မင်းကွန်း တိပိဋကဓရ ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှ လာရောက်ဂါရဝပြု ကန်တော့နေသောရှားပါး ဗီဒီယိုဖိုင်ပါ (၁) မိနစ်ခန့်သာကြာသည်။ ဖူးမျှော်ကြည်ညိုခွင့်ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။
ပထမသဂၤါယနာကို သာသနာႏွစ္ (၁) ဘီစီ-၅၄၄ တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ေဝဘာရေတာင္ သတၱပဏၰိလိုဏ္ဂူ မ႑ပ္ေတာ္၌ အရွင္မဟာကႆပ၊ အရွင္ဥပါလိ၊ အရွင္အာနႏၵာ အမႉးျပဳေသာ ရဟႏၲာ အပါး ၅ဝဝ တို႔က အဇာတသတ္မင္း အေထာက္အပံ့ ျဖင့္ ခုနစ္လတိုင္ ႏႈတ္တက္အကၡရာ သဂၤါယနာတင္ခဲ့ သည္။
ေအာက္ဆုံးတြင္ ရွားပါးဗီဒီယိုဖိုင္ေလး တင္ေပးထားပါသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ သဂၤါယနာကို သာသနာႏွစ္(၁ဝဝ) ဘီစီ-၄၄၃ တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေဝသာလီျပည္ ဝါဠဳကာ ရာမေက်ာင္းတိုက္၌ အရွင္ယသ၊ အရွင္သဗၺကာမိ၊ အရွင္ေရဝတ အမႉးျပဳေသာ ရဟႏၲာအပါး ၇ဝဝ တို႔က ကာလာေသာကမင္း အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ရွစ္လတိုင္ ႏႈတ္တက္အကၡရာ သဂၤါယနာတင္ခဲ့သည္။
တတိယသဂၤါယနာကို သာသနာႏွစ္(၂၃၅) ဘီစီ-၂၇၃ တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ပါဋလိပုတ္ျပည္ အေသာကာ႐ုံ ေက်ာင္းတိုက္၌ အရွင္မဟာေမာဂၢလိပုတၱတိႆ၊ အရွင္ မဇၩႏၲိက၊ အရွင္မဟာေဒဝ အမႉးျပဳေသာ ရဟႏၲာအပါး ၁ဝဝဝ တို႔က သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီး အေထာက္အပံ့ ျဖင့္ ကိုးလတိုင္ ႏႈတ္တက္အကၡရာ သဂၤါယနာတင္ခဲ့သည္။
စတုတၳသဂၤါယနာကို သာသနာႏွစ္(၄၅ဝ) ဘီစီ-၉ဝ တြင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ မလယဇနပုဒ္ အာေလာကလိုဏ္ဂူ၌ အရွင္မဟာဓမၼရကၡိတ အမႉးျပဳေသာ ရဟႏၲာအပါး ၅ဝဝ တို႔က ဝဋၬဂါမဏိမင္း အေထာက္အပံ့ျဖင့္ တစ္ႏွစ္တိုင္ ေပထက္အကၡရာ သဂၤါယနာတင္ခဲ့သည္။
ပၪၥမသဂၤါယနာကို သာသနာႏွစ္-၂၄၁၅ ခရစ္ႏွစ္- ၁၈၇၁ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မႏၲေလးေတာင္ေျခရွိ ေလာကမာ ရဇိန္ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားဝင္းအတြင္းရွိ စက်င္ေက်ာက္ ျဖဴ ၇၂၉ ခ်ပ္ေပၚတြင္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို အကၡရာ ေရးထြင္း၍
ခုနစ္ႏွစ္ ေျခာက္လ ၁၄ ရက္တိုင္ ေက်ာက္ထက္ အကၡရာတင္ျခင္း၊ တိပိဋကဓရ မဟာဓမၼရာဇာဓိရာဇာဂု႐ု ဘဒၵႏၲဇာဂရာဘိဝံသမဟာေထရ္ အမႉးျပဳေသာ သံဃာ ေတာ္အပါး ၂၄ဝဝ တို႔က ငါးလႏွင့္ သုံးရက္တိုင္ ႏႈတ္တက္ အကၡရာတင္ျခင္းျဖင့္ သဂၤါယနာတင္ခဲ့သည္။
ဆဌသဂၤါယနာကို သာသနာႏွစ္ ၂၄၉၈၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၁၃၁၆ မွ ၁၃၁၈) (ေအဒီ ၁၉၅၄ မွ ၁၉၅၆)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆ႒သိဂၤ ီမဟာပါသဏဂုဟာ ေက်ာက္လိုဏ္ဂူေတာ္ႀကီးတြင္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား သန႔္ရွင္းစင္ၾကယ္၍
ကမာၻအရပ္ရပ္သို႔ ပိုမိုပ်ံ႕ႏွံ႔ကာ အဓြန႔္ရွည္ၾကာစိမ့္ေသာငွာ ေညာင္ရမ္းဆရာေတာ္ဘုရား၊ ေနာင္တြင္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားတို႔က သံဃနာယကျပဳၿပီး မဟာစည္ဆရာေတာ္က ေမး၍ မင္းကြန္း တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္က ေျဖဆိုေတာ္မူကာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ကမ္းပူးခ်ားႏိုင္ငံ၊ ေလာႏိုင္ငံ၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ စေသာ ေထရဝါဒႏိုင္ငံ ၅-ႏိုင္ငံမွ သံဃာေတာ္မ်ားအပါအဝင္ သံဃာေတာ္ေပါင္း ၂၆၁၇-ပါး တို႔ႏွင့္ ဆ႒သဂၤါယနာ တင္ေတာ္မူသည္။
ေနာက္ဆုံး ဆ႒သဂၤါယနာမွ သာသနာ့အာဇာနည္ အရွင္ျမတ္ႀကီး ႏွစ္ပါးမွ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ေနာက္ဆုံးခႏၶာဝန္ခ်ပြဲတြင္. မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ညီေတာ္ျဖစ္ေသာ.. မင္းကြန္း တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမွ လာေရာက္ဂါရဝျပဳ ကန္ေတာ့ေနေသာရွားပါး ဗီဒီယိုဖိုင္ပါ (၁) မိနစ္ခန႔္သာၾကာသည္။ ဖူးေမွ်ာ္ၾကည္ညိဳခြင့္ရေအာင္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။
ဒီလောက်ဖော်ထုတ် ပေးထားတာတောင် အရေးမယူ ရဲဘူးလို့ ဆရာသက္ကမိုးညို ဒဲ့ပြောပြီ
တရုတ်ခရီးသွားများအား ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ ထုတ်ပေးခြင်းကို မြန်မာစတင်ယာယီရပ်ဆိုင်း